အခြေခံပညာ အတန်းများတွင် စာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်ပွဲအကြောင်းပြုပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူမျာ? - Yangon Media Group
အခြေခံပညာ အတန်းများတွင် စာမေးပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်ပွဲအကြောင်းပြုပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူမျာ?
အခြေခံ ပညာအတန်းများတွင် စာမေးပွဲ နှင့် နှုတ်ဆက်ပွဲများအကြောင်းပြုပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများထံမှ ငွေကြေးများ မကောက်ခံကြရန် သတိပေးမှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်ဆုံး ချိန်၌ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ ၏ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ အခြေခံ ပညာထက်၊ လယ်၊ မူကျောင်းများ မှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ အတန်း ပိုင်များ၊ အတန်းမှူးများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးသည် စာမေး ပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်ပွဲများကိုအကြောင်း ပြုပြီး မည်သည့်ငွေကြေးမှ ကောက် ခံခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် သတိပေး ထေားပြီး ယင်းကဲ့သို့ကောက်ခံမှုများ ကြောင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ် ပေါ်ပါက သက်ဆိုင်ရာကျောင်း အုပ်ကြီးများက တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာ နမှ သိရသည်။
“ကျောင်းတွေမှာ ဒါတွေမ လုပ်ရဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိဖြစ် ပေမယ့် ရာသီချိန်တစ်ခုရောက် တိုင်း သတိပေးနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့် ဝန်ထမ်းတွေ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုး လို့ သတိပေးမှုတွေလုပ်နေရတာ။ ဒီအပေါ်မှာလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့သူ ကတော့ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံပဲလေ”ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေ ဖြင့် အခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့် လှစ်သည့်အချိန်၊ ပြပွဲပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပ သည့်အချိန်၊ စာမေးပွဲများ၊ နှုတ်ဆက် ပွဲများ ကျင်းပချိန်များ၊ ဆရာကန် တော့ပွဲများအတွက် ငွေကြေးကောက် ခံခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားပြီး ယင်းကဲ့ သို့အချိန်များရောက်တိုင်း သတိပေး ချက်များ၊ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း များကို ကြိုတင်ညွှန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
“ဒီလိုငွေကြေးကောက်ခံတာ ကို ကျောင်းအုပ်တွေက ကြီးကြပ် ပေးရမယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်း မှာ ကျောင်းအုပ်ကတာဝန်အရှိဆုံးလူ၊ သူကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ကိုင်တွယ် နိုင်မှဖြစ်မှာ၊ နို့မို့ဆိုသူကိုယ်တိုင် မလုပ်ပေမယ့် သူ့လက်အောက်ဆရာ တွေလုပ်တာကိုမသိဘဲ အရေးယူ ခံရရင် ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရပါ ထိ ခိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျောင်းအုပ် ကြီးတွေအနေနဲ့ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ ပြောချင်တယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြော ကြားသည်။၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အထိ သုံးနှစ်အတွင်း ပညာရေး ဝန်ထမ်း ၁၃၀ဝ ကျော်ကို အရေး ယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။